Chautari Daily » आस्था राउत प्रकरणमा : लोक गायिका सुनिता दुलालको आक्रोश
आस्था राउत प्रकरणमा : लोक गायिका सुनिता दुलालको आक्रोश
काठमाडौं / जनताको जन्मसिद्द बोल्न पाउने अधिकार यसरी खोस्न नहुने गायिका सुनिता दुलालले बताएकी छिन् । हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक देशमा पनि नागरिकको बोल्न पाउने अधिकार कुन्ठित गरिएकोमा उनले आपत्ति जनाएकी छिन ।
“गल्ति मानि सबाटै हुन्छ, सबै मानिसको एउटै स्वभाव हुँदैन कसैले अ त्या चा र सहन्छ भने कोही त्यस बिरूद्धमा खरो उत्रिन्छ,” उनले फेसबुकमा लेखेकी छिन कि, “लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको देशमा जनताले बोल्न पाउने अधिकार छ । अ त्या चा र परेको बेला म पनि बोल्छु । मान्छे मा रे को होइन । रिसको आबेगमा आस्थाको बोलीमा केही शब्द चयन गलत भयकै हो । तर उहाँ आफैंले त्यसलाई फिल गरेर माफी मागिसकेको अवस्थामा बोल्दैमा अ*प*रा*धि*क चित्रण गरी गायिका आस्था राउतलाई प*क्रा*उ पूर्जी तय गर्नु निन्दनीय नै छ ।”
“आशालाग्दा ठूलठुला नेताहरूले पनि अन्तर्वार्ता दिने क्रममा स्टुडियो भित्रै पत्रकार र जनतामाथि धेरै अपमानजनक शब्द बोल्दा खोई त प*क्राउ पू*र्जी ? कानुन सबैको लागि बनेको होइन ?” सुनिता अगाडि लेख्छिन्, “अन्याय र अत्याचार बिरुद्ध बोल्ने पाउने अधिकार छ । साधारण आवेशमा भएको गल्तिमा यो सम्मको निर्णय गर्नु आपत्तिजनक छ ।”
उनले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि येतिखेर आस्थालाई भने केहि राहत मिलेको छ ! गल्ति कसको के भएको हो भन्ने कुरा भने यथार्थ रुपमा बाहिर आउन जरुरि छ
प्रकाशित मिति ७ माघ २०७६, मंगलवार १५:४२